Cheap Polished aluminom alloy ụzọ na windo nhazi akụkụ factory na suppliers | Ouzhan
Aluminom alloy ụzọ na window extrusion
N'ime iri afọ ole na ole, ụlọ ọrụ ahụ ejirila teknụzụ dị elu na-akwalite mgbanwe nhazi ụlọ ọrụ, na-akwalite mmeghari ngwaahịa, njikarịcha usoro, na-ejikọ sayensị na teknụzụ, ma belata oghere ahụ na ọkwa mba ụwa. obodo m nke ala aluminom na windo ulo oru mgbochi ulo oru enwetawo ebube di ebube. Aluminom alloy ụzọ na windo bụ ngwaahịa nke mmepe nke ihe owuwu ọhụrụ nke oge a. Emebere ha na obodo ndi mepere emepe dika Germany, United States, na United Kingdom dika mbido 1930. N'ihi na profaịlụ alloy alloy bụ ihe dị nfe, ha nwere ike wepu profaịlụ na ụdị akụkụ dị mgbagwoju anya, ọkachasị aluminom Ọdịdị mara mma nke ọnụ ụzọ alloy na windo na ụlọ ha kachasị mma emeela ka ndị na-ese ụlọ kwenye.
Njirimara profaịlụ Aluminom
Aluminom profaịlụ corrosion eguzogide: Njupụta nke aluminom profaịlụ bụ naanị 2.7g / cm3, nke bụ ihe dị ka 1/3 nke njupụta nke nchara, ọla kọpa ma ọ bụ ọla (7.83g / cm3, 8.93g / cm3, karị). N'okpuru ọtụtụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi, gụnyere ikuku, mmiri (ma ọ bụ mmiri nnu), petrochemical na ọtụtụ sistemu kemịkalụ, aluminom nwere ike igosi njigide corrosion dị mma.
Nkọwapụta profaịlụ Aluminom: A na - ahọrọ profaịlụ aluminium n'ihi ezigbo njikwa ya. Na ndabere nke oke nha, ihe arụ nke aluminom dị nso na 1/2 ọla kọpa.
Igwe mmezi nke igwe: Igwe ikuku nke alloy alloy bụ ihe dị ka 50-60% nke ọla kọpa, nke bara uru maka imepụta ndị na-ekpo ọkụ ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ ọkụ, arịa nri, na isi isi ụgbọ ala na radiators.
Na-abụghị ferromagnetic: Aluminom profaịlụ bụ nke na-abụghị ferromagnetic, nke bụ ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ eletriki na eletrikiiki. Aluminom profaịlụ na-ejighi ọkụ na-ere ọkụ, nke dị mkpa maka ngwa metụtara njikwa ma ọ bụ ịkpọtụrụ ihe ọkụ ọkụ na ihe mgbawa.
Arụ ọrụ: Ọrụ nke profaịlụ aluminom dị mma. N'ihe dị iche iche aluminom alloys na nkedo alloys, yana na steeti dị iche iche emechara alloys ndị a ka emechara ha, njirimara igwe dị iche iche dị iche iche, nke chọrọ igwe akụrụngwa pụrụ iche ma ọ bụ teknụzụ.
Nhazi: Ike a kapịrị ọnụ, na-enye ike, ikike na arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-achịkwa mgbanwe na nrụrụ nwere ike ịgbanwe.
Recyclability: Aluminom bụ nke a na-emegharị nke ọma, na njirimara nke aluminom emegharịrị fọrọ nke nta ka ọ ghara iche na isi aluminom.
Ahaziri aluminum alloy ụzọ na window extrusion akụkụ
Ihe onwunwe Aluminom alloy (ihe nhọrọ)
Ojiji Ndị na-agbanwe ego, ndị na-ekpo ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ, arịa ndị e ji esi nri, na ndị isi ụgbọ ala na radiators, wdg.
Nke gara aga: Electroplated aluminum alloy machined akụkụ
Osote: CNC igwe anaghị agba nchara akụkụ